महाकाली बेच्नेले हामीलाई ‘राष्ट्रवाद’ सिकाउनु पर्दैन? ‘यो झण्डा हामीलाई पनि प्यारो छ’ « Today Khabar
महाकाली बेच्नेले हामीलाई ‘राष्ट्रवाद’ सिकाउनु पर्दैन? ‘यो झण्डा हामीलाई पनि प्यारो छ’
प्रकाशित ३१ जेष्ठ २०७४, बुधबार १६:३८
काठमाडौं, १ असार । राजपाले आफ्नो माग पुरा नभएको भन्दै पुनः आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरे । धेरैको आँकलन थियो, जनता निर्वाचनमा जान आतुर छन्, आन्दोलनको प्रभाव हुदैंन तर ठिक उल्टो जनता पुनः आन्दोलनमा सहभागिता जनाए । पहिलो चरणको नोमिनेशन लाई रोक्नका लागि राजपाले ४ दिनको बन्द आव्हान गरे ।
बारम्बार मधेश आन्दोलन हुदैं गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा उठने प्रश्न थियो, मधेशीहरुको ‘राष्ट्रियता’ माथि । यस पटक आन्दोलनको शुरु कै दिनमा सडकमा अनोठौं मन छुने दृश्य देखियो । आन्दोलनकारीले हातमा पार्टीको झण्डा सँगै राष्ट्रिय चन्द्र सूयं अंकित झण्डा बोकेर, यो आन्दोलन राष्ट्रिय एकताको लागि भनेर सन्देश दिए ।
जानकारहरु बताउँछन्, मधेशका युवाहरु नेपाललाई कति माया गर्छन ? नेपालको राष्ट्रियतालाई कति सम्मान गर्छन, एउटा नागरिकका लागि देश कति प्यारो हुन्छ भने कुरा यो उदाहरण हो । मधेशी सचेत युवाहरु अलग देश खोजेका होइन, यही देशमा आफ्नो अधिकार खोजेका हुन, मधेशी अनुहार हेर्दैमा बिहारी, भारतीय देख्नेहरु लाई युवाहरुले गतिलो झापड दिएका छन् ।
उग्र राष्ट्रवादका नारा लगाउनेहरुलाई मुखमा तामाचा हो, जनकपुरको आन्दोलनमा राष्ट्रिय झण्डा लिएर होमिएका एक युवाले भने, हामी यो आन्दोलनमा कुनै पार्टीको नभई मधेशी जनताको अधिकारको लागि उभिएका हौं, हामी कुनै पार्टी विशेषलाई भन्दा पनि जनताको पक्षमा उभिएको तर्क गरे । उनले अगाडि थपे, मधेश आन्दोलन कुनै व्यक्ती विशेषको होइन, यो त आम मधेशी जनतालाई राष्ट्रको मुलधारमा समाहित गर्ने अभियान हो ।
विरगञ्जमा राष्ट्रिय झण्डा लिएर आन्दोलनमा होमिएका एक मधेशी युवाले भने, कोशी, महाकाली, कर्णाली र देशलाई सत्ताका लागि अरुलाई बेच्नेले हामीलाई अराष्ट्रवादी भनेको पट्टकै सुहाँउदैन, दलालहरुले मधेशी जनतालाई राष्ट्रवाद नसिकाए हुन्छ, हामी दिनहुँ सिमानामा आफ्नो भुमि रक्षाका लागि उभिएका हुन्छौं, अनि उल्टै हामी माथि शंका गर्ने ?
यस पटकको आन्दोलनमा विरगञ्ज, जनकपुर, राजविराज लगायतका क्षेत्रमा राजपाका कार्यकर्ताहरु पार्टीका झण्डा लिएर सहभागि बनेका छन् भने, कुनै पार्टी सँग आबद्ध नभएका स्वतन्त्र युवाहरु राष्ट्रिय झण्डा लिएर उभिएका छन् ।